တောင်သမန်သားလေး: July 2013
ကွန်ပျူတာ သမားများ အတွက် ကိုယ်တွေ့ ခါးနာ ပျောက်ဆေးနည်း
ကွန်ပျူတာ သုံးတာ ကြာပြီ ဆိုတော့ ခါးနာ ရောဂါလည်း ဖြစ်လာတာပေါ့။
ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ ခါးကပိုနာလာတယ်။ဆေးနည်းကနက္ခတ္တ ရောင်ခြည်ကနေရထားတာကြာလှပြီ။အမှုအမှတ်မဲ့ မစမ်းကြည့် ဖြစ်ဖူး။ အခုတော့ စမ်းမှ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး -
အာလူးကြီးတစ်လုံးကို ခပ်ပါးပါးအလွှာတွေ ရအောင် လွှာပြီး ညအိပ်ယာ ၀င်တော့ နာနေတဲ့ ခါးပေါ်မှာ စီပြီး ကပ်လိုက်တယ်။အားကစားသမားတွေ သုံးတဲ့ အလပ်စတစ် ပတ်တီးပတ်ပြီး အိပ်လိုက်တယ်။ မနက်ကျတော့ ခါးနာနေတာ ယူပစ်သလို ပျောက်သွားတယ်။ အံ့ရောပဲ ...
အာလူးထဲမှာ ပါတဲ့ ဓါတ်သဘာဝ တွေကအရေပြား ကနေ ခါးနာတဲ့ နေရာကို ၀င်သွားလို့ ဒါမှမဟုတ် ခါးနာဆီကနေ အာလူးကစုပ်ယူ လိုက်လို့ပျောက်သွားတယ် ထင်တယ်။
နွယ်မြက် သစ်ပင် ရိုးရာ ဆေးမြီးတို လေးတွေလည်းအထင် မသေးကြနဲ့ ဗျို့။
Ref: Myawady News
Credit to : မြဝတီ (ကျန်းမာရေး)
Posted by lin linn at 5:16 AM
ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များအား ဆက်ကြေးပေးပြီး နေထိုင်နေရကြောင်း ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဖေါင်ဒေးရှင်း (ထိုင်းနိုင်ငံ)မှ အကြီးတန်း အကြံပေး ဦးထူးချစ်က The Daily Eleven သတင်းစာသို့ ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အထောက်အထား မရှိသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားမှာ အများအပြား ရှိနေပြီး အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ အထောက်အထားများ ရရှိပြီး တရားဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင် နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိကြောင်း အဆိုပါ ၀န်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
''လက်ရှိအချိန်အထိ မှတ်ပုံမတင်နိုင်သေးတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားက တစ်သန်းခွဲလောက် အထိရှိနေပါတယ်။ အအထောက်အထား ရှိတာက တစ်သန်းခွဲလောက် ရှိပါတယ်။ အထောက်မထား မရှိတဲ့ သူတွေကတော့ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို ဆက်ကြေးပေးနေ ရတာတွေရှိတယ်။ တစ်ချို့တွေက သူဌေးတွေရဲ့ အကာအကွယ်နဲ့ နေကြတာတွေရှိတယ်။ ပုံမှန်တိုင်းပဲ နေနေတာတွေလည်း ရှိတယ်'' ဟု ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖေါင်ဒေးရှင်း (ထိုင်းနိုင်ငံ)မှ အကြီးတန်း အကြံပေး ဦးထူးချစ်က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများမှာ ထိုင်းအစိုးရက သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံလစာ အနည်းဆုံး ဘတ် ၃၀၀ မရဘဲ လုပ်ကိုင်နေရကြောင်း သိရပြီး လစာအပေါ် ခေါင်ပုံဖြတ် ခံနေရမှုများ ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ၏ လုပ်ငန်းရှင်များသည် ၎င်းတို့အား တရားဝင် မှတ်ပုံတင် အလုပ်သမားများ မဖြစ်စေချင်ကြကြောင်း တရားဝင် ဖြစ်သွားလျှင် အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာ ဘတ် ၃၀၀ မပေးချင်သည့် အတွက်ကြောင့် အထောက်အထားများ ပြုလုပ်ရာတွင် ဟန့်တားနေမှုများ ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမ၀င် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများနှင့် ပတ်သက်၍ အကူအညီ ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ နည်းပါးလျက်ရှိကြောင်း သိရပြီး ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖေါင်ဒေးရှင်း (ထိုင်းနိုင်ငံ)မှ အကြီးတန်း အကြံပေး ဦးထူးချစ်က ''မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ အလုပ်သမားအရေး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သင့်တယ်'' ဟု အကြံပြု ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ စက်မှုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သည့် နေရာများနှင့် ရနောင်း၊ ချင်းမိုင် စသည့် နေရာများတွင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အများအပြား ရှိကြောင်း သိရသည်။
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အချက်အလက်များအရ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမ၀င် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ၁ ဒသမ၂၃ သန်းကျော်အား ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by lin linn at 6:49 AM
ဘဝမှာ အောင်မြင်ချင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်ချင်သူများ ...
" ဘဝမှာ အောင်မြင်ချင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်ချင်သူများ ... "
၁။ မိမိရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ... Be Positive ဖြစ်အောင်နေပါ။
၂။ မိမိရဲ့ အဝတ်အစား အပြင်အဆင် အပြောအဆိုဟာ .. လူအထင်ကြီး လေးစားဖွယ်ဖြစ်အောင် နေပါ။
၃။ မိမိက်ိုယ်မိမိ ... မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းအပေါ် Confidence ရှိပါ။
၄။ မိမိနဲ့ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့ Organization , Team , Coworkers တွေအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု ရှိပါ။
၅။ မိမိဘာကို လုပ်ဆောင်မယ် .. ဘာကိုိ ရည်ရွယ်တယ် ဆိုတာ "Goals to be Clear" ဖြစ်နေရမယ်။
၆။ မိမိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းအပေါ်မှာ Professional ကျကျ ကျွမ်းကျင်အောင် ကြိုးစားနေရမယ်။
၇။ အလုပ်ကို ကြိုးစားချင်စိတ် အမြဲရှိနေရမယ်။ (Wiling to work hard)
၈။ က်ိုယ်စတင်လုပ်ကိုင်တဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာ ဇွဲရှိရမယ်။ သစ္စာရှိရမယ်။
၉။ လူတွေကို ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ... အထက်အောက် အကြီးအငယ် မခွဲခြားဘဲ မည်သူ့ဆီမှ အသိပညာ အတတ်ပညာကို မဆို သင်ယူချင်စိတ်ထားပါ။
၁၀။ ငါသိ ငါတတ်ဆိုတဲ့ ဝါးလုံးခေါင်းထဲမှာ လသာနေတဲ့ အတွေးတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ( Think outside the box ) !!!
(Knowledge sharing from my job conference experience in Ontario, California, convention center)
Credit to (သမီးဆိုး)
အေးချမ်းမွန် Credit To > သက်တံ့ရောင် ပုံရိပ်များ < Thank
Reposted By ACM 28-7-2013
Ashampoo Burning Studio 12.0.3.8 FINAL with Reg Key
thuyaaung: ကိုပြည်.ရေ asgampoo burning 12 key လေးလိုချင်လို.ရှိရင်တင်ပေးပါအုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Cbox မှာတောင်းထားတဲ့သူရှိလို့အခြားသောလိုအပ်တဲ့သူငယ်ချင်းများလည်း အသုံးပြုနိုင်အောင် တင်ပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Ashampoo ကတော့ Editing , Burning , Converting , အစရှိတဲ့ Software တွေထုတ်တဲ့
Ashampoo Burning Studio 12 is our award-winning one-stop burning application to burn, backup and process all your documents, photos, videos and music. The only burning software you will ever need! + Backup or burn your files to Blu-ray, DVD or CD + Author and create slideshow and video discs + Create music CDs and MP3/WMA discs + Design booklets and covers + Create and browse disc images
Windows® XP, Windows Vista®, Windows®7, Windows® 8 (On Windows® XP, Windows Vista®, Windows®7 & Windows® 8 administrator privileges are required for the installation.)
2. Install by double clicking on "ashampoo_burning_studio_12_e12.0.3_sm.exe" with admin rights.
3. Select "Custom Installation". Uncheck the boxes for program updates, tool bar, homepage change, web search.
4. Do not open (launch) the program yet.
6.PILIH Registration.reg SESUAI OS ANDA...
7.BILA MENGGUNAKAN OS DENGAN SYSTEM 32 BIT...PILIH REGISTRATION X86.REG 8.BILA MENGGUNAKAN OS DENGAN SYSTEM 64 BIT.. PILIH REGISTRATION X64.REG 9.KLIK2KALI REGISTRATION XXX.REG OR RUN US..PILIH YES...
10.ENJOY FULL VERSI
Posted by lin linn at 2:59 AM
သား။ "အဖေ မိန်းမနဲ့တူတူနေတာ ဘယ်လိုအရသာရှိလဲ..."
အဖေ။ "မင်းရဲ့နှာခေါင်းထဲကို လက်ချောင်းနဲ့နှိုက်တဲ့ အရသာမျိုးပေါ့သားရဲ့..."
သား။ "အဲ့လိုအခါမျိုးမှာ မိန်းမတွေက ယောက်ျားတွေထက် ဘာလို့သာယာမှုပိုရတာလဲ အဖေ..."
အဖေ။ "ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မင်းနှာခေါင်းကိုနှိုက်တဲ့အခါ မင်းလက်ချောင်းထက် နှာခေါင်းက အရသာပိုရှိလို့ပေါ့ကွ..."
သား။ "မိန်းမတွေ အဓမ္မကျင့်ခံရတာကျတော့ ဘာလို့ မသာယာတာလဲအဖေရဲ့..."
အဖေ။ "ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် မင်းက လမ်းပေါ်မှာလျှောက်သွားနေတုန်း တစ်ယောက်ယောက်ကလာပြီး မင်းနှာခေါင်းကိုနှိုက်မယ်ဆိုရင် မင်းအရသာရှိပါ့မလား..."
သား။ "မိန်းမတွေ ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန် ဘာကြောင့် ယောက်ျားနဲ့တူတူမနေချင်ရတာလဲ အဖေ..."
အဖေ။ "မင်းကော နှာခေါင်းသွေးယိုနေတဲ့အချိန်မှာ နှာခေါင်းနှိုက်လို့လား..."
သား။ "မိန်းမနဲ့တူတူနေနေတုန်း ယောက်ျားတွေက ဘာလို့ ကွန်ဒုံးမဝတ်ချင်ကြတာလဲ အဖေ..."
အဖေ။ "မင်းနှာခေါင်းနှိုက်တာကို လက်အိတ်ဝတ်ပြီးနှိုက်ချင်ပါ့မလား သားရယ်..."
သား။ "လင်နဲ့မယားတွေက ဘာလို့ လူကွယ်ရာမှာပဲ တူတူနေကြတာလဲ အဖေ..."
အဖေ။ "မင်းက အတန်းဖော်တွေရဲ့ရှေ့မှာ နှာခေါင်းနှိုက်မှာလား..."
Ref: Inspire Your Friends
Posted by lin linn at 6:17 AM
ဖုန်စုပ်စက် အရောင်း/မာကဲတင်း တစ်ဦးဟာ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့  တံခါး ပေါက်ကို သွားခေါက်ပါတယ်။
အိမ်ရှင်မ အမျိုးသမီးက တံခါးပေါက်ဖွင့်ပေးရုံပဲ ရှိသေးတယ်။ အရောင်း အမျိုးသားက အိမ်ထဲ တန်းဝင်လာပြီး ဧည့်ခန်း အလယ်တည့်တည့်မှာပဲ အသင့်ပါလာတဲ့ နွားချေးထုပ် ကို ဖြေလို့ သွန်ချလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အောက်ပါအတိုင်း စကားဆိုပါတယ်။
အိမ်ရှင်မ - အင်း. ငရုတ်ဆီလိုသေးလား.။
သင်ခန်းစာ - မည်သည့် စီမံကိန်း /Project ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စတင်မလုပ်ကိုင်မှီ လိုအပ်တဲ့ အရင်းအမြစ် (Resource) ရှိမရှိ စုဆောင်း၊ စစ်ဆေး ရပါမယ်။
Over smartness in Myanmar can be deadly.
Posted by lin linn at 6:12 AM
ရှောင်လေကောင်းလေ အို ရွှေမြန်မာတွေ....
မိစ္ဆာ ကုလား ကြီးပွားမှာကို စိုးထိတ်ရင်။။
ကုလား စီးပွားရေးကို အားမပေးပါနဲ့(ရှောင်လေကောင်းလေ)။။
ကုလား သွေးနှောမှာကို စိုးထိတ်နေရင်။
ကုလားကို အနီးကပ် မပေါင်းပါနှင့်(ရှောင်လေကောင်းလေ)။။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ဆုံးရှုံးမှာကို ကြောက်နေရင်
မုဒိန်း ၊ မီးရှိုး ၊ အနိဌါရုံမှကင်းလွတ်ချင်ရင်
ဘယ်တော့မှ ကုလားကို လမ်း ရပ်ကွက် မ၀င်စေနဲ့(ရှောင်လေကောင်းလေ)..
ခင်ဇော် (အမျိုး ဘာသာ အတွက် လင်းလက်ကြယ်).
Posted by lin linn at 6:10 AM
3 Oct 12, 06:15 PM
ဇော်ဖော်: အကိုရေ လာလည်သွားတယ်နော် ဟဲဟဲ........ နေကတိုင်းကိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ် အကိုဆိုဒ်ကို နည်းပညာတွေ ဒီထက်မက မျှဝေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်အကို vcd/dvd software လေးတစ်ခုနဲ ခွေကူးပုံးလေး တင်ပြပေးပါအုံးအကိုေ
13 Oct 12, 10:52 PM
ဇော်ဖော်: အကိုရေ ကူညီပါအုံးဗျို့ img software လေးနဲ့ ခွေကူးပုံကူးနည်းလေးတွေ ဖော်ပြပေးပါအုးံးနော် မလုပ်တတ်လို့ပါဗျာ ကူးညီပါအုံး
အစဉ်သဖြင့် ကျနော့် Blog လေးက မသိသေး၊ မလုပ်တတ်သေးတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အတွက် ဦးစားပေး၊ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ.. အခြေခံနည်းပညာလေးတွေကို အားလုံးလုပ်တတ်၊ ကိုင်တတ်ရှိဖို့ ကိုပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်.။ ကွန်ပျူတာကို ကျွမ်းကျင်ပြီးသား သူများအနေနဲ့ ကျနော့် Blog လေးက ရယ်စရာ၊ ကလေးကစားစရာ Blog လေးတခုလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်.. ကျနော့်လို Blog မျိုး ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကျနော်ရှာလို့ မတွေ့သေးပါ.. ကျနော် ဆော့ဝဲလ်တခု တင်ပေးလိုက်ရင် အနည်းဆုံးတော့ အကြမ်းမျဉ်း သုံးတတ်အောင် ကျနော်ရှေ့ကနေ လုပ်ပြပေးတာ အကျင့်လိုဖြစ်နေပါပြီ.. အဲ့အတွက် ကျနော် အချိန်တွေ အများကြီးပေးရပါတယ်.. ပုံတွေများရင် များသလို နာရီပေါင်း များစွား အချိန်ကုန်ပါတယ်.. ကျနော်မအားတဲ့ ရက်တွေမှာ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ၊ တောင်းထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ တင်မပေးနိုင်ခဲ့ရင် နားလည်ပေးကြပါဗျာ.. တခြား Blog တွေလို တစ်ရက်ထဲ ဆော့ဝဲလ် ၅ခု၊ ၁၀ခု တင်ပေးလို့ ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတို့ သုံးလို့ရချင်မှ ရမယ်.. သုံးတတ်ချင်မှ သုံးတတ်မယ်.. အဲ့လိုဆို ပေးတဲ့လူအတွက်လည်း အကျိုးမရှိဘူး.. ဒေါင်းယူရတဲ့ လူအတွက်လည်း အချိန်ကုန်ပြီး အကျိုးမရှိဘူး.. ကျနော်အဲ့လို တွေးမိပါတယ်.. ဒါကြောင့် ကျနော်တခုခုတင်လိုက်တိုင်း သုံးတတ်ပြီး ၊ သုံးလို့ရပြီး အကျိုးရှိတာလေးတွေကိုပဲ တင်ပေးချင်ပါတယ်.. ပိုစ့်တင်တာ နည်းတဲ့ အခါကျရင်တော့ ကျနော်မအားလို့ဆိုတာ နားလည်ပေးကြပါဗျာ..
အခုဒီပိုစ့်လေးကို ကျနော့်သူငယ်ချင်း တော်တော်များ ကလည်း မသိသေး ၊ မလုပ်တတ်သေးလို့ ဒီအခွေကူးနည်း လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ကျနော့် Blog မှာတင်ပေးထားပြီးသား ရှိတဲ့ Ashampoo Burning Studio 11 နဲ့ Nero 8 Essential ဆော့ဝဲလ်တွေကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ပြပေးထားပါတယ်.. လိုအပ်တဲ့သူများ အဲ့ဒီ Burning Tool တွေကို ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..
ဒီပိုစ့်မှာ Mp3 သီိချင်းတွေကို CD နဲ့ ခွေကူးပြထားပါတယ်.. Slide Show တွေ၊ မိသားစု ရိုက်ထားတဲ့ Video တွေကို DVD ခွေနဲ့ကူးရင်လည်း ဒီနည်း အတိုင်းပါပဲ.. လုပ်နည်းက အတူတူပါပဲ.. ဝင်ရမယ့်နေရာ နည်းနည်းရွေးပေးဖို့ပဲ လိုတာပါ..
အရင်ဆုံး ကျနော် Ashampoo Burning Studio 11 နဲ့ အရင်လုပ်ပြထားပါတယ်.. အဲ့တော့ အောက်က ပထမပုံကတော့ Video တို့၊ Slide Show တို့ကို DVD နဲ့ ကူးမယ်ဆိုရင် A, B အတိုင်း နှိပ်ပြီး လုပ်ပေးယုံပါပဲ.. C နေရာကတော့ VCD ခွေကူးဖို့ပါ..။ ခွေကူးနည်းကတော့ အောက် ဒုတိယပုံနောက်ပိုင်း လုပ်ပြထားတဲ့ ပုံတွေနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး.. ကျနော့်ဆီမှာ MP3 သီချင်းတွေပဲ ရှိတဲ့ အတွက် အောက်ဒုတိယပုံ ကနေစပြီး ဆက်ကြည့်ပေးပါ.. နောက်ပြီး Windows Media Player နဲ့ သီချင်းတွေကို တပုဒ်ပြီးတပုဒ် လာအောင် ဖွင့်နည်းလေးပါ သူငယ်ချင်းတယောက် တောင်းထားလို့ ဒီပိုစ့်မှာ တခါတည်း လုပ်ပြထားပါတယ်..
MP3 သိချင်းတွေကို CD ခွေနဲ့ကူးဖို့ အောက်ကပုံအတိုင်း 1,2အတိုင်း နှိပ်ပြီး လုပ်ပါတယ်..
ပေါ်လာတဲ့ ပုံတွေအတိုင်း (အပေါ်ပုံတွေလို) အဆင့်ဆင့် နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..။ အောက်ကပုံ အဆင့်ကို ရောက်ပြီဆိုရင် ပေါ်လာတဲ့ ဘောက်စ်ထဲမှာ မိမိတို့ ခွေကူးချင်တဲ့ သီချင်း ( Video တို့၊ Slide Show တို့) တွေကို မျှားပြထားတဲ့ အတိုင်း မိမိတို့ သိမ်းထားတဲ့ ဖိုဒါထဲမှာ သွားရှာပေးပါ.. အောက်ကပုံမှာတော့ ကျနော် ခွေကူးမယ့် MP3 သိချင်းတွေကို ရှာပြထားပါတယ်.. တွေ့ပြီဆိုရင် တခုထဲဆိုရင် တချက်ကလစ်ရင် ရပါပြီ.. သီချင်းတွေ အများကြီးဆိုရင်တော့ ကီးဘုတ်က ရှော့ကပ်ကီး Ctrl+A နဲ့ All Select ပေးလိုက်ပါ.. ပုံမှာပြထားသလို အပြာရောင်လေးတွေ ဖြစ်သွားရင် မျှားပြထားတဲ့ အတိုင်း အောက်ဆုံးက Add ကို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ..
အောက်ကပုံ အတိုင်း ဆက်ပေါ်လာရင် ခဏစောင့်ပေးလိုက်ပါ..
အပေါ်ပုံအတိုင်း ပေါ်လာရင်တော့ ခွေကူးလို့ ရပါပြီ.. MP3 သီချင်းတွေကို CD နဲ့ ကူးလို့ ရမရ၊ အပေါ်ပုံ အောက်နားက လေးထောင့်ကွက်သေးလေးထဲမှာ 198.5 MB လို့ ပြထားပါတယ်.. CD တချပ်မှာ 700 MB ရှိတဲ့ အတွက် ဒီသီချင်းတွေကို CD နဲ့ကူးယူလို့ ရပါတယ်..။ တကယ်လို့ မိမိခွေကူးမယ့် သီချင်း (သို့) Slide Show က 700 MB ကျော်နေရင်တော့ CD သုံးလို့ မရပါဘူး.. DVD နဲ့ပဲ ခွေကူးလို့ ရမှာ.. Video ဖိုင်တွေ ဆိုရင်တော့ VOB / AVI ဖေါ်မတ်ပြောင်းပြီး DVD ခွေနဲ့ကူးပါ.. ဖေါ်မတ်ပြောင်းဖို့ ဆိုရင်တော့ Format Factory ဆော့ဝဲလ်လေးက အသုံးဝင်ပါတယ်.. လိုအပ်တဲ့သူများ အဲ့ဒီဆော့ဝဲလ်တင်ပေးထားတဲ့ ပိုစ့်မှာ သွားပြန်ယူနိုင်ပါတယ်.. အသုံးပြုပုံလေးပါ ပြပေးထားပါတယ်.. အပေါ်ပုံမှာ အခွေကူးတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မျှားအနီပြထားတဲ့ အောက်ဆုံးက Next ကိုနှိပ်ပါတယ်.. အောက်ကပုံ အတိုင်းပေါ်လာရင် ခဏစောင့်ပေးလိုက်ပါ..
ဒီအောက်ကပုံ အတိုင်းပေါ်လာရင် အခွေမထည့်ရသေးတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မျှားပြထားတဲ့ အတိုင်း Open Tray ကို နှိပ်ပါ.. အဲ့ဒီနေရာကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ DVD ROM ကထွက်ကျလာပါလိမ့်မယ်.. အဲ့ဒါဆိုရင် ခွေအသစ်ထည့်ပေးပြီး ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါ.. အခွေကူးတဲ့ အခါမှာ အနာအစာ မရှိတဲ့ အခွေသစ်ပဲ ဖြစ်ရပါမယ်..
အခွေထည့်ပေးပြီးလို့ရှိရင်တော့ ဒီကောင်လေးက အခွေကို စစ်ပါလိမ့်မယ်.. Burn လို့ရတဲ့ ခွေ ဖြစ်မဖြစ်..။ Burn လို့ရတယ်ဆိုရင် အောက်ကပုံလိုမျိုး အမှန်ခြစ်လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.. အဲ့ဒါဆိုရင် အောက်ဆုံးက Write (Write CD) ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..။
အောက်ကပုံတွေအတိုင်း အခွေ Burn ဖို့ ပြင်ဆင်ပြီး၊ အဆင့်ဆင့် ခွေကူးပါလိမ့်မယ်.. ဘာမှ လုပ်ပေးဖို့ မလိုတော့ပါဘူး.. ထိုင်ကြည့်နေယုံပါပဲ..
အခွေကူးလို့ ပြီးသွားရင်တော့ သူ့ဖာသာ အခွေထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်.. ကူးပြီးသား အခွေကို ယူပြီး ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ အောက်ကပေါ်လာတဲ့ ဘောက်စ်လေးမှာ OK ပေးလိုက်ပါ..
အခွေကူးစရာ မရှိတော့ဘူး ဆိုရင်တော့ အပေါ်ပုံအတိုင်း Exit နဲ့ ထွက်လို့ ရပါပြီ.. ဒါဆိုရင် အခွေကူးနည်း ပြီးသွားပါပြီ.. Nero8 နဲ့ခွေကူးချင်တဲ့သူများကတော့ အောက်ဆုံးပုံတွေမှာ ဆက်ကြည့်ပေးပါ.. ဒီအောက်ကပုံကတော့ အခုကူးလိုက်တဲ့ ခွေကို ပြန်ထည့်ပြီး သီချင်း ဖွင့်ကြည့်တာပါ.. MP3/CD/DVD Player တွေနဲ့ ဖွင့်လို့ ရသွားပါပြီ.. ဒီပိုစ့်မှာတော့ တခါတည်း Windows Media Player နဲ့ သီချင်းတွေကို တပုဒ်ပြီး တပုဒ် ဆက်တိုက်လာအောင် ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာ မသိသေးတဲ့ သူများအတွက် ဆက်ပြပေးထားပါတယ်.. မသိသေးတဲ့ သူများ ဆက်ကြည့်ပေးပါ..
ကျနော်တို့ CD ထဲက သီချင်းတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖိုဒါထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ သီချင်းတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တပုဒ်ပြီး တပုဒ် ဆက်တိုက်လာအောင် အောက်ကပုံလေးအတိုင်း ဖွင့်လိုက်ရင် သီချင်းတွေ ဖိုဒါထဲ ၊ CD ထဲမှာ ရှိသလောက် ဆက်တိုက်လာနေပါလိမ့်မယ်..
အဲ့တော့ သီချင်းရှိတဲ့ ဖိုဒါကို အရင်ဖွင့်ပါ.. ဒီမှာတော့ အခု ခွေကူးလိုက်တဲ့ CD နဲ့ လုပ်ပြထားပါတယ်.. လုပ်နည်းအတူတူပါပဲ.. မိမိတို့သီချင်းတွေ ပေါ်လာပြီဆိုရင် အောက်ကပုံအတိုင်း သီချင်းအားလုံးကို ကီးဘုတ်က Ctrl+A နဲ့ အောစလက်ပေးလိုက်ပါ.. ပြီးရင် အဲ့ဒီပေါ်မှာ Right Click ထောက်ပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း Add to Windows Media Player List ကို ကလစ်ပေးလိုက်ရင် သီချင်းတွေ တပုဒ်ပြီး တပုဒ် ပြီးတဲ့ အထိ လာနေပါလိမ့်မယ်..
အောက်ကပုံအတိုင်း သီချင်းတွေ တပုဒ်ပြီး တပုဒ် ဆက်တိုက်လာနေပါပြီ..
----------------- ------------------------------- ---------------------
ဒီအောက်မှာတော့ Nero8 Essentials နဲ့ အခွေကူးပြထားပါတယ်.. အပေါ်ပုံတွေနဲ့ လုပ်နည်းအတူတူပါပဲ.. အဝင်မှာ နည်းနည်း မတူတာလေးပါပဲ.. ကျန်တာအားလုံး အတူတူပါပဲ.. MP3 ဆိုရင် အောက်ကပုံအတိုင်း သွားရင်လည်း ရပါတယ်.. ဒုတိယပုံနဲ့ ပိုလွယ်တဲ့ အတွက် ဒုတိယပုံနဲ့ လုပ်ပြထားပါတယ်..
ဒီအောက်ကပုံအတိုင်း Data Burning ကိုနှိပ်ပါ..
အပေါ်ပုံအတိုင်း Add ကနေ နှိပ်ပြီး အောက်ကပုံအတိုင်း မိမိတို့သိမ်းထားတဲ့ MP3 သီချင်းတွေကို ယူပါတယ်.. တွေပြီဆိုရင် Ctrl+A နဲ့ အောစလက်ပေးပြီး ပုံရဲ့အောက်ဆုံးက Open ကို ကလစ်ပါ..
အောက်ကပုံအတိုင်း သီချင်းတွေ ရောက်သွားပြီဆိုရင် Name မှာ မိမိတို့ ကြိုက်တဲ့ နာမည်ပေးလို့ ရပါတယ်..
CD နဲ့ ရမရ သိရအောင် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကို ကြည့်ပြီး Burn ကို နှိပ်ပါ.. အဲ့ဒါဆို DVD ROM ထွက်ကျလာရင် အခွေသစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါ.. အပေါ်ဆုံးပုံတွေ အတိုင်း သူ့ဖါသာ အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်.. ပြီးသွားရင် အခွေထုတ်ပေးရင် ယူပြီး ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါ.. နောက်ပိုင်း အဆင့်တွေမှာတော့ Burning Tool တွေက အတူတူပါပဲ..
အောက်ကပုံကတော့ Nero8 နဲ့ Photo Slide Show လုပ်လို့ ရတဲ့ နေရာလေးပါ ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အခွေမကူးတတ်သေးတဲ့ သူများ အခွေကူးတတ်လောက်ပါပြီ..
ဂျူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ ထဲမှာ ပါလာတဲ့ "လမ်းလယ်ကောင် ကားတွန်းခဲ့ရသောဗိုလ်ချုပ်" ဆိုတဲ့ ဆောင်ပါးထဲက ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာပိုဒ်လေးကို ပြန်လည် မျှဝေပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ၀ူစလီကားနက်လေးမှ ယာဉ်မောင်းသည် လမ်းဆုံသို့ရောက်သော် ဘရိတ်ကို အသာမှေးပြီး အရှိန်ကိုလျှော့လိုက်သည်။ ထိုစဉ်မှာပင် လမ်းပြပုလိပ်သည် မောင်ဂိုမာရီ လမ်းမကြီးမှ ကားများကို လွှတ်ပေးနေစဉ် စတော့ကိတ်လမ်းဘက်မှ ၀ူစလီကားနက်လေးကို ဖြုန်းခနဲ မြင်လိုက်သည့်အခါ ပြာပြာသလဲဖြစ်သွားပြီး လမ်းမကြီးမှ ကားများကို ခရာတွတ်၍ ရပ်တန့်လိုက်သည်။ ပြီးမှ ကားနက်လေး ဆက်မောင်းနှင်ရန် လက်ပြပေးနေသည်။သို့သော် ကားနက်လေးမှာ စက်ရှိန်ပြန်အတင် လမ်းဆုံးအလယ်တွင် စက်ရှိန်သေကာ ရပ်သွားလေသည်။ ယာဉ်မောင်းသည် စက်ပြန်နှိုးသည့်အခါ တဖွတ်ဖွတ်သာ အသံထွက်လာပြီး စက်က နိုးမလာပေ။လမ်းပြ ပုလိပ်ကလည်း တစ်ဖက်ယာဉ်ကို တားပေးထားပြီး ကားနက်လေးအတွက်သာ လမ်းပေးလက်ပြနေဆဲ၊ သို့ပေသည့် ကားလေးခမျာ တုပ်တုပ်မျှ မလှုပ်တော့။ ထိုအခါ ကားနောက်ခန်းတွင် ထိုင်လိုက်လာသော ပုဂ္ဂိုလ်က စိတ်လောတကြီးဖြင့် -
"ဟေ့ကောင် မြန်မြန်လုပ်လေ၊ ဟိုမှာ လမ်းပြပုလိပ်မောင်းခိုင်းနေပြီ၊
ဤတွင် ယာဉ်မောင်း၏ဘေးတွင် ထိုင်လိုက်လာသောသူက နောက်သို့ လှည့်၍ -
"အော် ဗိုလ်ချုပ်ကလည်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်ပါနေတာပဲဟာ ...
"ဤတွင် နောက်မှ ပုဂ္ဂိုလ်က စိတ်မရှည်ဟန်ဖြင့် -"ဟေ့ကောင်၊ ငါပါတာပါတာပဲ၊ ဥပဒေက ဥပဒေပဲကွ" ဟုပြောလိုက်လေသည်။
ဟုတ်ပါသည်။ 'ဥပဒေက ဥပဒေပဲ' ဟု ပြောလိုက်သူက မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ၊ မြန်မာ့မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by lin linn at 6:47 AM
၁။ ကိုယ့်ကို အကူအညီမတောင်းမချင်း သူတပါးအလုပ်ကို ၀င်မစွက်ဖက်မိအောင် ပြုမူနေထိုင်ပါ။
၂။ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မွေးမြူနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၃။ လိုချင်စိတ်တော့ထားပါ။ သို့သော် ငတ်ကြီးမကျမိအောင်ကိုယ့်လောဘကို ထိမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
၄။ တဖက်သားအပေါ်မနာလိုဝန်တိုစိတ် မဖြစ်မိစေရန် ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ထားပါ။
၅။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲမှ ရနိုင်မည်ဆိုသည့်အသိမျိုးကို အမြဲပျိုးထောင်ပေးထားပါ။
၆။ ကိုယ့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့အမူအကျင့်ကို လွယ်ကူစွာ ကုစားနိုင်သူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။
၇။ မရဲဘဲ ကျွဲလှည်းစီးချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးမမွေးမိအောင် ကြိုးစားပါ။
၈။ ကောင်းမှုတစ်ခုကို နေ့စဉ်ပြုလုပ်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ် မွေးမြူထားပါ။
၉။ ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့အတူ အချိန်မဆွဲမိအောင် ကြိုးစားပါ။
၁၀။ ဘယ်တော့မှ သတိလက်လွတ်မဖြစ်စေရအောင် ကြိုးစားနေထိုင်ပါ။
Posted by lin linn at 6:48 AM
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ကျည်ဆံများ....။
(မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ သန်း(၆၀)ကျော် ကျည်ဆံချက် သန်းပေါင်း (၇၈၀)ကျော်ယနေ့ထိ ဘ၀တွေ သေခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ထပ်တူထပ်မျှ သေဆုံးကြရပါတယ်။)
Posted by lin linn at 6:46 AM
အသက်(၂၇)နှစ်ရှိ ရိုချဲလ်ဟားရစ်သည် ယခုနှစ်အတွင်း ချစ်သူနှင့်အတူ ပီရူးနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ် သွားရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည် တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ နိုင်ငံတွင် လည်ပတ်ခဲ့ပြီးနောက် နေရပ်သို့ ပြန်လာစဉ် လေယာဉ်ပေါ်တွင် ကတည်းက ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ရ..
... ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီး တစ်ဦးသည် အားလပ်ရက် အလည်အပတ် ခရီးမှအပြန် ခေါင်းကိုက်မှုကို စစ်ဆေးရာ ဦးခေါင်းထဲ ရောက်နေသည့် အသားစား ပိုးလောက်များကို ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အသက်(၂၇)နှစ်ရှိ ရိုချဲလ်ဟားရစ်သည် ယခုနှစ်အတွင်း ချစ်သူနှင့်အတူ ပီရူးနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ် သွားရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည် တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ နိုင်ငံတွင် လည်ပတ်ခဲ့ပြီးနောက် နေရပ်သို့ ပြန်လာစဉ် လေယာဉ်ပေါ်တွင် ကတည်းက ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် သူမ၏ မျက်နှာတွင် နာကျင်မှုအချို့ ရှိခဲ့ပြန်သလို နားထဲတွင် ဆူဆူညံညံ အသံများ ကြားနေရသည်။ ထို့နောက် နားထဲမှ အရည်အချို့ပါ စိမ့်ထွက်ခဲ့သည့်နောက် ရိုချဲလ်သည် ဆရာဝန်များနှင့် တိုင်ပင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အစောပိုင်းက ဆရာဝန်များသည် ရိုချဲလ်တွင် အသေးစား နားတွင်း ပိုးမွှားဝင်ရောက်မှု တစ်ခုခု ဖြစ်နေသည်ဟုသာ ယူဆခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်အပြီးတွင်မူ အသားစား လောက်ကောင်များ သူမ၏ နားထဲတွင် ရှိနေသည်ကို ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဖြစ်ပုံမှာ ပီရူးတွင် ရှင်သန်နေထိုင်လေ့ရှိသည့် Screw Worm Flyခေါ် ယင်ကောင် တစ်မျိုးသည် ရိုချဲလ်၏ နားတွင် ဥများ ဥချခဲ့ပြီး ယင်းတို့မှ ပေါက်ဖွားလာသည့် လောက်ကောင်များသည် သူမ၏ နားထဲတွင် ကမ္ဘာသစ်တစ်ခု တည်ထောင်ရန် တပ်ဖွဲ့တစ်ခု စုစည်းနေခြင်းဟု သိရသည်။ ရိုချဲလ်၏ နားပြွန်ထဲတွင် (၁၂)မီလီမီတာမျှ အနက်ရှိသည့် တွင်းငယ်တစ်ခုကို ယင်းတို့က လှိုက်စား တူးဖော်ထားသည်။
ရိုချဲလ်အတွက် ကံကောင်းခဲ့သည်မှာ အဆိုပါ ပိုးမွှားများသည် အဓိက သွေးကြောကြီးများကို မထိပါးသေးသလို ဦးနှောက်နှင့်လည်း ဝေးကွာနေဆဲ ဖြစ်နေခြင်းဟု ဆိုသည်။ ဒါဘီအရပ်တွင် နေထိုင်သော အမျိုးသမီးကို ဆရာဝန်များက ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ကာ ယင်းပိုးလောက်များကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါ ရိုချဲလ်သည် အပြည့်အဝ သက်သာ ကောင်းမွန်လာနေပြီဟု သိရသည်။ ရိုချဲလ်၏ သဘောတူညီမှုအရ သူမ၏ ဝေဒနာ ဖြစ်စဉ်ကို မှတ်တမ်းတင်ကာ Discovery Channelအတွက် &quot;Bugs၊ Bites and Parasites&quot;ဆိုသော အမည်ဖြင့် ရိုက်ကူးထားခဲ့သည်။
ယင်းသို့သော သက်ရောက်မှုတွင် လူနာအနေဖြင့် အတိအကျ ကြိုတင် မှန်းဆ၍ မရသော ဝေဒနာ လက္ခဏာများ ပြသတတ်ကြောင်း ပညာရှင်များက ဆိုသည်။ တော်ဝင်ဒါဘီ ဆေးရုံမှ သုတေသီများသည် အစောပိုင်းက သာမန် ပြဿနာဟုသာ ထင်ခဲ့သော်လည်း ရိုချဲလ်၏ နားတွင်းပြွန်တွင် အပေါက်ငယ် တစ်ခုကို တွေ့ရှိရာမှ မျက်လုံးပြူးလောက်စရာ အခြေအနေကို ကြုံလာရခြင်း ဖြစ်သည်။ &quot;ကျွန်မအမေက ဆရာဝန်ကို ဘာမြင်လဲလို့ မေးတယ်။ ဆရာဝန်က ပြောသင့် မပြောသင့် ချင့်ချိန်နေတော့ အမေက ပြောပြဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။ ဒီတော့ နားထဲမှာ လောက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်မကို ဆရာဝန်က ပြောပါတယ်။ ကျွန်မ ချက်ချင်းပဲ ငိုလိုက်မိတယ်&quot;ဟု ရိုချဲလ်က သူမ၏ အတွေ့အကြုံကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
ဆရာဝန်များက အပြင်ဘက်မှနေ၍ ပိုးလောက်များကို ရယူရန် ကြိုးစားသော်လည်း ဆေးဝါး ထောက်ပံ့မှုက လောက်များကို ဦးနှောက်ဘက် ပိုမို တိုးဝင်သွားမည်ကို စိုးရိမ်ခဲ့ရသည်။ &quot;ကျွန်မ သိပ်ကြောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဦးနှောက်ထဲသာ သူတို့ ရောက်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ တကယ့်ကို ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ အခြေအနေပဲလေ&quot;ဟု ရိုချဲလ်က ဆိုသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဆရာဝန်များက အရေးပေါ် ဦးနှောက် Scanဖတ်မှု ပြုလုပ်ပြီးနောက် သူမ၏ ကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း သတင်းကောင်းအဖြစ် လောက်ကောင်များ၏ ဦးနှောက်ကို ထိရောက်တိုက်ခိုက်မှု မရှိသေးကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် နားစည်၊ မျက်နှာ အာရုံကြော ဆဲလ်များနှင့် အဓိက သွေးကြောများကိုပါ ဆိုးကျိုးသက်ရောက် မနေချေ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ နားပြွန်လမ်းကြောင်းတွင် အနက်(၁၂)မီလီမီတာစာမျှ အသားကို လောက်များက စားသောက်ထားပြီး ဖြစ်နေသည်ကို ဆရာဝန်များ ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဆရာဝန်များသည် နားထဲသို့ သံလွင်ဆီ လောင်းထည့်ကာ ယင်းအဖျက်ပိုးမွှားများကို တိုက်ဖျက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ &quot;တစ်ညလုံး စောင့်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မဘဝမှာ အရှည်ကြာဆုံး နာရီတချို့ပဲ&quot;ဟု ရိုချဲလ်က ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ &quot;အဲဒီကောင်တွေကို ကျွန်မကိုယ်ထဲက မြန်မြန် ထွက်သွားစေချင်တယ်။ ခုချိန်မှာ ကျွန်မခေါင်းထဲက အသံတွေ မြည်နေတဲ့ ခံစားချက်ဟာ ဘာကြောင့်လဲ သိနေပြီလေ။ ပိုဆိုးလာသလို တွေးမိတယ်&quot;ဟုလည်း သူမက ဆိုသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ဆရာဝန်များက သူမ၏ နားကို စစ်ဆေးရာ လောက်ကောင်များသည် သန်သန်မာမာပင် ဆက်လက် ရှင်သန်နေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ယင်းတို့အနက် (၂)ကောင်ကို ဖယ်ထုတ်နိုင်သော်လည်း ထပ်၍ ကျန်နေမည်ကို ဆရာဝန်များက စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ခွဲစိတ် ဆရာဝန်များက နားလမ်းကြောင်းထဲ မှန်ပြောင်းငယ် ထည့်သွင်းပြီး စစ်ဆေးရာ တုန်လှုပ်လောက်စရာ မြင်ကွင်းနှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။
ဆရာဝန်များက လူးလွန့်နေသော လောက်ကောင်စုကြီးကို သနားစရာ အမျိုးသမီး၏ နားထဲတွင် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အနည်းဆုံး အကောင်ကြီး (၈)ကောင်မျှသည် ရိုချဲလ်၏ နားထဲတွင် ပျော်ပါး ကျက်စားနေကြောင်း သိရှိလာပြီးနောက် ရိုချဲလ်ကို ခွဲစိတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အပြင်ရောက်နေသည့် လောက်ကောင်များကို ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်၍ မူရင်းမျိုးနွယ်ကို ခြေရာခံခဲ့ရာ ပီရူးရှိ ရွှံ့နွံများတွင် ကျက်စားတတ်သည့် Screw Worm Fly ယင်ကောင်များ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မူ ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်သလို ရိုချဲလ်၏ နားထဲမှ စက်ဆုပ်ဖွယ် ကပ်ပါးကောင်များကို အပြီးတိုင် ရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ရိုချဲလ်တွင် မည်သည့် ခေါင်းကိုက်မှု၊ နာကျင်မှု၊ ခေါင်းထဲမှ အသံမြည်မှုမျိုးမျှ မရှိတော့ချေ။ တစ်စထက်တစ်စ သက်သာပျော်ရွှင်လာသည့် ရိုချဲလ်က &quot;ကျွန်မတော့ ပိုးကောင်တွေကို အရင်ကလောက် ရွံတတ်တော့မယ် မထင်ဘူး။ ကိုယ့်ခေါင်းထဲကို ဒီလိုကောင်မျိုး ရောက်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို တွေးကြည့်လိုက်လေ&quot;ဟု ပြောကြားသွားသည်။
Posted by lin linn at 6:43 AM
တစ်ခါက ခရီးဝေးကလာတဲ့ အဖိုးကြီးသုံးယောက်က အိမ်တစ်အိမ်ရှေ့မှာ အမောဖြေနားနေကြတယ်................
အဲအချိန်မှာ အိမ်ရှင်မက ထွက်လာပြီး အိမ်ထဲဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။
သူမအဲ့လိုဖိတ်လိုက်တော့ အဖိုးကြီးတစ်ယောက်က ထပြောတယ်..
" အဘတို့ သုံးယောက်စလုံးတော့ အိမ်ထဲကိုလိုက်လို့မရဘူး..
ခေါ်ချင်တယ်ဆို ငါတို့ထဲကတစ်ယောက်ကိုပဲ ရွေးခေါ်လို့ရမယ်..
အဘဘေးက သူငယ်ချင်းနာမည်က " ချမ်းသာခြင်း " ဖြစ်ပြီး
ဟိုဘက်ဘေးကသူငယ်ချင်းကတော့ " အောင်မြင်ခြင်း " လို့ခေါ်ပြီး
အဘနံမည်ကိုတော့ " ချစ်ခြင်းမေတ္တာ " လို့ခေါ်တယ်..
ဒီတော့ သမီးအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီး ဘယ်သူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုတာကိုသမီးယောက်ျားနဲ့
အိမ်ရှင်မလည်း အိမ်ထဲဝင်ပြီးတိုင်ပင်တော့ ခင်ပွန်းက " အောင်မြင်မှု့ " ကို ဝင်ခွင့်ပြုရအောင် ၊ ယောက်ခမက " စည်းစိမ်ချမ်းသာ " ကိုသာ ဖိတ်ခေါ်သင့်တယ်နဲ့ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် အကြံပေးကြတယ်.........
ဒေါင့်နားလေးမှာကပ်နေတဲ့ ချွေးမ ဖြစ်သူကတော့ "ကျမသာဆို " ချစ်ခြင်းမေတ္တာ " ကိုပဲ ဝင်ခွင့်ပြုမှာ သူသာရှိရင် ကျမတို့ အိမ်လေးသာယာနေမှာ" လို့
ပြောလိုက်တာနဲ့ အားလုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖိတ်ခေါ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပြီး
အိမ်ရှင်မက ' ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ' ကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကိုဖိတ်ပေမယ့် ကျန်နှစ်ဦင်္းကဘာကြောင့်လိုက်ဝင်ရသလဲလို့
" အကယ်၍မင်းကသာ ' ချမ်းသာခြင်း ' နဲ့ ' အောင်မြင်ခြင်း ' ထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖိတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျန်၂ယောက်က အပြင်မှာ ကျန်နေရစ်ခဲ့မှာအမှန်ပဲ ....
ဒါပေမယ့် အခုမင်းက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖိတ်လိုက်တာဆိုတော့ အဘတို့က သူ့နောက်ကို လိုက်ကိုလိုက်ရတော့မှာပဲလေ..
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဘတို့ ၂ယောက်က မျက်မမြင်၂ယောက်ပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကသာ ငါတို့ဘ၀ရဲ့ အလင်းရောင်..ငါတို့ရဲ့ အရှင်သခင်ဖြစ်ပြီး သူလမ်းညွှန်တဲ့နောက်ကို ငါတို့ကအမြဲလိုက်နေရတာပါ" လို့
သင့်ဘ၀မှာ " ချစ်ခြင်းမေတ္တာ " တရားတွေနဲ့သာပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင် ' ချမ်းသာခြင်း ' အောင်မြင်ခြင်း ' တွေကိုအလိုလိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုတာကို ဒီပုံပြင်လေးက ဖော်ပြထားတာပါ..
Credit to Ingyin Htay Aung (မိတေး )
Posted by lin linn at 7:07 AM
1. ရတနာသုံးပါးအလေးမထား ပေါ့ပျက်ပျက်နေတက်သောမိန်းမ.....
2. အင်္ဂျာီလယ်ဟိုက် sexy ကြိုက် ယောက်ျားများရှေ့ ကုန်းကုန်းကွကွ လုပ်တက်သော မိန်းမ...
3. ဘောင်းဘီချက်ပျုတ် စတိုင်လ်ထုတ် ဖင်မှီးကုတ်ရိုးပေါ်အောင် ဝတ်ထားသော မိန်းမ.....
4. အင်္ဂျာီပါးပါး တမင်ဝတ်ထား အတွင်းသားတွေကို ပြချင်သော မိန်းမ....
5. စကတ်တိုလက်တအုပ် အရှက်ထုတ် မလုံ့ တလုံပေါ်အောင် ဝတ်တက်သော မိန်းမ....
6. ခေတ်ကိုတင်စား ရင်သားနဲ့ တင်ပါးမှာ Tattooe ထိုးထားသော မိန်းမ....
7. နောက်ကြောပြောင်ချော အမှောင်တောမှာ ကချင် လှုပ်ချင် (DANCE) တဲ့ မိန်းမ....
8. ဘောင်းဘီအသားကတ် အနေမတက် ခြေထောက်ကို ကားထိုင်သော မိန်းမ....
9. ယောက်ျားတွေ့မြင် အကွက်ဆင် ချွဲပျစ်ပျစ်ပြောတတ်သော မိန်းမ....
10. မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး ရှဲဒိုးသုံး မြင်မကောင်းအောင် မျက်တောင်တုတွေ တက်ထားသော မိန်းမ....
11. သွားမှာ စိန်မြှုပ် ရယ်စရာမဟုတ် ရယ်စရာလုပ် အီတဖြဲဖြဲ ရယ်ပြနေသော မိန်းမ....
12. လူစုံလျင် ဂျင်းသုပ် သုပ် အတင်းတလှုပ်လှုပ်ပြောတက်သော မိန်းမ....
13. အလုပ်နားရက် ထမင်းမချက် အပျင်းထူပြီး တစ်နေကုန်အိပ်သော မိန်းမ....
14. ဝင်ငွေရရေး လက်မနှေး ဦးနှောက်မရှိတိုင်း ဗေဒင်မေး ချဲထိုးသော မိန်းမ....
15. လမ်းသွားလျင် မျက်စိရွှင် စမတ်ကျသောယောက်ျားတိုင်းကို ပြုံးပြသော မိန်းမ.....
16. အပြောပက်စက် လက်ကသွက် တို့ ဆိတ် လိမ်ဆွဲ အီပြောတက်သော မိန်းမ...
17. အချစ်ကိုရောင်း ပိုက်ဆံတောင်း လိုချင်တာကို ချူယူတက်သော မိန်းမ....
18. အိမ်မှာကြွက်သိုက် အပြင်မှာ ခက်မိုက်မိုက် ဝတ်စားတက်သော မိန်းမ....
19. အတုနဲ့အစစ် ရောလို့ဝတ် လူမြင်တိုင်း အမိအရကြွားတက်သော မိန်းမ...
20. ပြည်ပမှာစာသင် ငါသာသခင်ဟု ပညာဂုဏ်မောက်နေသော မိန်းမ....
21. နိုင်ငံခြားပြန်အခွံသာကျန် အပျိုရည်ပျက်နေသော မိန်းမ...
22. ရည်းစားရှိလည်း နံ့ကြောဆွဲ ကိုယ့်ထက်သာလျင် မျက်စောင်းတစ်ချက် ထိုးပစ်လိုက်သော မိန်းမ....
23. ရင်ဖုံးအင်္ဂျာီချိတ်လုံချည်နဲ့ ဘုရားကအပြန် ကားအမှန်တွေနဲ့ ပါ ပါသွားတတ်တဲ့ မိန်းမ...
24. အရှက်ကနဲ ရက်ကွက်ထဲ လူတကာအော့ကြောလန်အောင် နှုတ်ကြမ်းသော မိန်းမ...
25. ကိုယ့်ထက်သာလျင် အပြစ်မြင် မနာလိုစိတ်ထားရှိသော မိန်းမ....
26. Rapper ဆိုရင် အသေကြိုက် အဖေရိုက်လည်း ရိုက်ပစေဆိုတဲ့ ဆက်စလူးစိန် မိန်းမ....
27. အလုပ်ပြီးလျင် Net ဆိုင်ဝင် လူတကာနဲ့ အရသာခံ Q Q လုပ်တက်သော မိန်းမ....
28. အဖော်နောက်လိုက် အပျော်ကြိုက် လမ်းသလားသော မိန်းမ.....
29. ကိုးရီးယားဆို အထင်ကြီး ငရုပ်သီးစပ်ရင်တောင် အူပါးလို့ အော်တက်တဲ့ မိန်းမ....
30. ညအိပ်ရာဝင် ရေမချိုးချင် ညစ်ပတ်နံစော်နေသော မိန်းမ......
Posted by lin linn at 7:05 AM
ကလေးကယ်ကို ချီထားသော ဂျစ်ပစီအမျိုးသမီးတစ်ယောက် တက္ကစီကိုတားသည်။ဂျစ်ပစီတွေတွေ့လျှင် ပိုက်ဆံတောင်းတတ်သည်။
အတင်းဗေဒင်ဟောတတ်သည်ကို သိနေသော ကားဆရာ ကားကိုရပ်
မပေးချင်။သို့သော် ပွေ့ချီထားသောကလေးကို သနားသဖြင့်ကားကိုရပ်ပေးလိုက်သည်။
ကားပေါ်ရောက်သည်နှင့် ဂျစ်ပစီမ စကားစသည်။
“ကျွန်မမှာ ကားခပေးစရာ ပိုက်ဆံမရှိဘူးအကို။အဲဒီအတွက် အစ်ကို့ကို
“မဟောနဲ့ မင်းသွားချင်တဲ့နေရာဟာ ငါ့အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ရှိနေတာပဲ
“ဒီလိုဆိုလည်း ကျွန်မသိထားတဲ့ အအမှန်တရားသုံးခုကိုတော့ ပြောခွင့်ပြုပါအကို”
“ပထမအမှန်တရားက ဆိတ်ဟာ သူ့မုတ်ဆိတ်ကို ဘယ်တော့မှမရိတ်ဘူး”
“ဒုတိယ အမှန်တရားက လမင်းဟာ အလင်းရောင်ကိုပေးတယ်ဒါပေမယ့်
“တတိယအမှန်တရားက ဘာလဲဆိုတော့ အစ်ကို့ဇနီးဟာ အိမ်နီးချင်းနဲ့
လျှောက်ပြောမနေနဲ့၊နင့်ပါးစပ်ကို ပိတ်လိုက်၊ငငါနင့်ကို ကားပေါ်က
သွားချင်သည့်နေရာကို ရောက်တော့ ဂျစ်ပစီမ ကားပေါ်ကဆင်းသွားသည်။
ကားဆရာ အိမ်ကိုတန်းပြန်သည်။မိန်းမဖြစ်သူ ၄င်းကိုကြိုဆိုပြီး ညစာကျွေးသည်။ အစာစားရင်းယောကျာ်းကပြောသည်။
“ဒီနေ့ ဂျစ်ပစီမတစ်ယောက် ငါ့ကားကိုလိုက်စီးတယ် မပြောနဲ့ဆိုလည်းမရဘူး
“ဆိတ်ဟာ သူ့မုတ်ဆိတ်ကို ဘယ်တော့မှ မရိတ်ဘူးတဲ့”
“ပြီးတော့ လမင်းဟာ အလင်းရောင်ကိုပဲပေးတယ်၊အနွေးဓါတ်ကိုမပေးဘူးတဲ့”
မိန်းမဖြစ်သူ အထပ်ထပ်ပူဆာသည်။နောက်ဆုံးတော့ ယောကျာ်းဖြစ်သူ
“အေး မင်းဒီလောက်သိချင်နေရင်ပြောမယ်။ တို့ အိမ်နီးချင်း အီဗန် တစ်ယောက် ယောကျားမပီသတဲ့ရောဂါ(Impotent)ဖြစ်နေတယ်ဆိုပဲ”
“ဟင်း..ဟင်း အဲဒါတော့ ရှင့်ဂျစ်ပစီမ မှားပြီ” တိန်...တိန်...တိန်
Post By :Moekyashweco
Posted by lin linn at 5:36 AM
(၁) ဝံပုလွေတွေဟာ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ဆိုပြီး ကိုယ်ငယ်ရွယ်အားပျော့ချိန်မှာ ကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးမားသူကို မတိုက်ခိုက်ဘူး။
(၃) ဝံပုလွေလည်း တောဘုရင်ဖြစ်ချင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုယ်သူတို့တော့ ဝံပုလွေဆိုတာကို သူတို့သိထားတယ်။
(၅) ဝံပုလွေတွေဟာ တစ်ကိုယ်တည်းလှုပ်ရှားတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့ဟာ စည်းရုံးမှုအင်အားကောင်းတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ကိုယ့်အဖော်ကို တစ်ကောင်တည်းထားပြီး သူတို့ထွက်မပြေးတတ်ဘူး။
(၉) ဝံပုလွေမိဘတွေဟာ ကိုယ့်ကလေးတွေ ကိုယ်တိုင်အစာရှာနိုင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးနိုင်ပြီဆို သူတို့အနားကခွာတယ်။ တကယ်လို့ ဝံပုလွေဟာ ဝံပုလွေလိုမကျင့်ကြံရင် သိုးပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကို ဝံပုလွေတွေသိလို့ဖြစ်တယ်။
(၁ဝ) ဝံပုလွေတွေဟာ အစာလို့လို ကိုယ့်သိက္ခာကိုတောင်မငဲ့ဘဲ သခင်ကို အမြီးနှံ့ပြတတ်သူ မဟုတ်ဘူး။ ဝံပုလွေတွေဟာ မာနထောင်လွှား စိတ်ကြီးဝင်တာကို မကောင်းဘူးဆိုတာသိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ကိုယ်နေရတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိတယ်။
နိုင်းနိုင်းစနေ (Tuesday, April 24, 2012)
ယောက်ကျားတဦးသည် အိမ်တွင် ကြမ်းပိုးများ သောင်းကျန်းလွန်းသောကြောင့် အထူးစိတ်ညစ်နေ၏။
၄င်းတို့ကို နည်း အမျိုးမျိုးဖြင့် သုတ်သင်သော်လည်း ဘယ်လိုမှ အကျိုးထူးမလာချေ။
သို့ဖြင့် အိမ်နီးချင်းများ အကြံပေးသည့်အတိုင်း စုန်းမကြီး ဟု နာမည် ကြီးသော ဆေးဆရာမကြီးထံ သွားကာ အကူအညီတောင်းရလေတော့သည်။
" အိမ်မှာရှိတဲ့ ပြူတင်းပေါက်တွေကိုဖွင့်ပီး.....
ရှိသမျှ ကြမ်းပိုးတွေ....ဒိုးလိုရာ...ဒိုးကြ.......လို့အော်ပါ...။အဲ...နောက်ဆုံး ကျန်တဲ့ ကြမ်းပိုး အထွက်မှာတော့ မရယ်မိပါစေနဲ့။"... ဟုသေချာ ဆို၏။
ယောက်ကျားကြီးလည်း အိမ်သို့ ပြန်လာပီး ဆရာမကြီးမှာသည့်အတိုင်း လုပ်လေသည်။
ကြမ်းပိုး များ သုတ်သီးသုတ်ပြာနှင့် ထွက်ပြေးကြ ၏။
အိမ်ရှင်ယောက်ကျားကြီးမှာ တပြုံးပြုံးဖြင့် ဆင်းသွားသော ကြမ်းပိုးများကိုကြည့်ကာ အရမ်းပျော်ရွှင်နေ၏။
နောက်ဆုံးအရိုးပေါ်အရေတင်၍.. ပိန်လှီလှသော ကြမ်းပိုးတစ်ကောင်သာ အားမရှိသဖြင့် တဖြေးဖြေးချင်းတွားသွားကာ အိမ်အပြင်သို့ထွက်နေလေ၏။
မိမိသွေးတွေကို စုပ်စဉ်က ဒီကြမ်းပိုးဒီရုပ်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဟု တွေးမိ၏။
ဤသည်ကို ကြည့်ပီး မအောင့်နိုင်သဖြင့် ယောက်ကျားကြီး သည်ဝမ်းသာလွန်း၍ အားရပါးရ ရယ်မိလေသည်။
ဤတွင် ကြမ်းပိုး သည် တွားသွားနေရာမှ ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်ပီး လူကြီးကိုစိုက်.ကြည့်နေလေ၏။
ထို့နောက် ရှိသမျှ အားကိုထုတ်ကာ လှမ်းအော်လိုက်သည်။
" ဟေ့....အားလုံး......ပြန်လာကြဟေ့.....အိမ်ရှင်က တို့ ကို ကျီစားတာကွ....."....တဲ့
ကိုလုံ ( Lon Ely )
Edison – ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုရာဝယ်
အက်ဒီဆင်က တီထွင်အောင်မြင်လို့ပြီးသွားတဲ့မီးသီးကို တခြားစမ်းသပ်ခန်းထဲ သူ့ရဲ့ တပည့်လက်ထောက်ကို ဂရုတစိုက်သယ်လာခိုင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီစမ်းသပ်ခန်းကို အသွားမှာ လှေခါးလေးတစ်ခုကို တတ်ရတယ်။တပည့်က သေချာဂရုစိုက်စွာ တစ်လှမ်းချင်း လှေခါးပေါ်တက်တယ် ။
... ဂရုစိုက်လေစိတ်တွေကပိုလုပ်ရှားပြီး လှေခါးပေါ်ရောက်ခါနီးမှာ
လှေခါးကနေ ခြေချော်ပြီး မီးသီးကျကွဲသွားတယ်။အချိန်ပေါင်းများစွာ အကုန်ခံပြီး ပင်ပန်းစွာ တီထင်ခဲ့တဲ့ မီးလုံးလေးကျကွဲသွားပေမဲ့ အက်ဒီဆင် က သူ့လက်ထောက်ကို အပြစ်မတင်ခဲ့ဘူး။
အပြစ်တင်ပြီး စိတ်ကွက်မှာ ကြောက်နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ..အက်ဒီဆင်က အပြစ်မတင်ခဲ့ဘူး..။နောက်ထပ်ပိုကောင်းမယ့် မီးသီးတလုံးအတွက်သာ အတူကြိုးစားကြဖို့ အားပေးခဲ့တယ်..
နှုတ်ကပဲ ခွင့်လွှတ်ပါတယ်လို့ ပြောမယ့်အစား…
အက်ဒီဆင့်လို .. သူ့အပေါ် နောက်တကြိမ် အခွင့်အရေးပေးကြည့်လိုက်တာက
သူငယ်ချင်းရဲ့စိတ်ဓါတ်ပြည့်ဝမှုကို ပိုပြီး..လှစ်ဟပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်.လို့ ထင်ပါတယ်
Credit - .ပိုးဟပ်ဖြူ. ( Heart Canteen )
Posted by lin linn at 6:23 AM
ကွန်ပျူတာတွေကို အထီး/အမခွဲခြားနိုင်တယ်လို့ဆိုရင် သင်အံ့သြသွားမလားမသိဘူး... ဒီလိုခွဲခြားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကွန်ပျူတာက အထီးလား/အမလားဆိုတာကို သိချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်... ဒီလိုခွဲခြားနိုင်တာ တကယ်ပဲလားဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ကွန်ပျူတာလှည့်ကွက်တစ်ခုလို့ပဲ မှတ်ယူထားစေချင်ပါတယ်... တစ်နေ့တစ်နေ့ အင်တာနက်မှာပဲ အချိန်ကုန်ပြီး ငြီးငွေ့နေသူတွေအတွက် ဒီလှည့်ကွက်လေးက အထိုက်အလျောက် အပန်းပြေစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်... လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်...
► ပထမဆုံး Note...pad ကို ဖွင့်လိုက်ပါ... ပြီးရင် ဒီစာကြောင်းလေးကို Notepad မှာ ရိုက်လိုက်ပါ...
► CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love you"
► ပြီးရင် Save as နဲ့ file name ကို computer_gender.vbs ဆိုပြီး save လိုက်ပါ....
► ပြီးရင် file ကို double clike နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ...
► သင်ကြားရတဲ့အသံက ယောက်ျားသံဆိုရင် သင့်ကွန်ပျူတာက အထီးဖြစ်ပါတယ်...
► သင်ကြားရတဲ့အသံက မိန်းကလေးသံဆိုရင် သင့်ကွန်ပျူတာက အမဖြစ်ပါတယ်...
► သင့်ကွန်ပျူတာက အထီးလား/အမလားဆိုတာကို comment လေးတွေပေးသွားကြပါဦး...
ဒီနည်းလမ်းလေးကနေ ထပ်ဆင့်လုပ်လို့ရတာကတော့ I love you ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ဖတ်စေချင် ပြောစေချင်တဲ့စာကြောင်းကို အစားထိုး ထည့်လို့ရပါတယ်... ဒါဆိုရင် ကွန်ပျူတာက အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့စာတွေကို ဖတ်ပြနေပါလိမ့်မယ်... စာပိုဒ်တော့ခွဲလို့မရပါဘူး... စာကြောင်းတွေဟာ တစ်ဆက်ထဲဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်... ဒီနည်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို အပျင်းပြေ စကားပြောခိုင်း စာဖတ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်... ပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
Posted by lin linn at 6:09 AM
အိမ်ရှေ့မှာ ဖြတ်သွားတဲ့ လူမှန်သမျှကို ဆဲတယ်...
အဆိုးဆုံးကတော့ ရဲ ဖြတ်သွားရင်အဆဲဆုံးပဲ...
လိမ္မာယဉ်ကျေးလာအောင်ဆိုပြီး ကြက်တူရွေးကို ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့လိုက်တယ်..။
်တစ်လ နှစ်လလောက်ကြာတော့ ကြက်တူရွေးကလေး
“အသိ နောက်ကျသွားပြီ ဒကာကြီး”တဲ့...။
ကမ္ဘာ့ သမိုင်းဝင်မြို့ အနေနဲ့ရော၊ ကမ္ဘာ့အလှဆုံးစားရင်ဝင်မြို့ အနေနဲ့ရော၊ နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့  အလှပဆုံး၊ အသန်ရှင်းဆုံး မြို့ အနေနဲ့ရော အသိမှတ်ပြု ဆုပေါင်းများစွာ ရရှိထားတဲ့ မြို့ လေး ဖြစ်ပြီး Alesund လို့ အမည်ရပါတယ်။
နော်ဝေနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ခြမ်းက ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့  တစ်ခုလည်း ဖြစ် ပါတယ်။ လူဦးရေ ၅ သောင်းဝန်းကျင်သာရှိပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ နေအိမ်များကို ယခုလို လှလှပပ မြင်တွေ့ ရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသည် များ သွားရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိတဲ့ ဒေသတစ်ခု လည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် မြို့ ရဲ့  အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းက Tourism ဖြစ် သွားပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ယနေ့တိုင် ပုံစံမပျက် ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ သမိုင်းဝင် ဘုရားကျောင်းများ၊ တိုက်တာ အဆောက်အအုံများ အမြောက်အများ တည်ရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by lin linn at 3:59 PM
Wednesday, July 31, 2013မြဝတီရေကြီးမှု အဆိုးဆုံး အ...
ထူးထူးခြားခြားပုံနှင့် ဟာသပုံများ, ဧဒင်အချစ...
ဘဝမှာ အောင်မြင်ချင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ...
Ashampoo Burning Studio 12.0.3.8 FINAL with Reg Ke...
မပြောင်ရင် စားမယ် YoYarLayမပြောင်ရင် စားမယ် .....
ရှောင်လေကောင်းလေ အို ရွှေမြန်မာတွေ.... -----------...
"လမ်းလယ်ကောင် ကားတွန်းခဲ့ရသောဗိုလ်ချုပ်" ဂျူလိုင် ...
ဘ၀မှာနေပျော်ချင်သူတို့အတွက် ဥပဒေသ (၁၀) ချက် မြန်မာ...
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ကျည်ဆံများ...
ရွေးချယ်ခွင့် ...Myanmar News Update တစ်ခါက ခရီးေ...
''အရေးမပေးသင့်သော မိန်းမများ'' ပုဂံအွန်လိုင်းမီဒီယ...
ဒါတော့မှားပြီ ဗေဒါလမ်း Baydarlan သုတ ရသ ဟာသ ပြည်ပအ...
ဝံပုလွေရဲ့ ဒဿန Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေဝံ...
ကြမ်းပိုးတိုက်ပွဲ Lon Elyကြမ်းပိုးတိုက်ပွဲ ယောက်က...
Edison – ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုရာဝယ် ရေးမိရေးရာလေးများE...
အထီးလား အမလား နှိုင်းရင့်နွေအထီးလား အမလား --------...
အသိနောက်ကျသွားပြီ ဗေဒါလမ်း Baydarlan သုတ ရသ ဟာသ ပြ...
သင်သောက်နေတဲ့ ကိုကာကိုလာ post By Myawady News, ...
အနာဂတ်လူငယ်နှင့် မြန်မာ့အင်တာနက် TechSpace Journa...
အင်္ဂါဂြိုလ် ပေါ် Up-date ဓါတ်ပုံ ကမ္ဘာမြေမှမိုင်ပေါင်...
နွားနို့ ထဲက ဖားလေးနှစ်ကောင်…July 3, 2013 at 10:12...
နောက်နှစ်ဆယ်ကြာရင်မိမိပုံဘယ်လိုနေမလဲနောက် အနှစ် (၂...
အဂ်ါဂြိုလ်ပေါ်မှ အမျိုးသမီးသည် မြန်မာဖြစ်ကြောင်း အခ...
ကြိုမမြင်နိုင်တဲ့ မနက်ဖြန်အတွက် .......Myanmar New...
ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ (ဟာသ) Aureum Online Mediaဖြိုးကြီးသည် ...
သံပုရာသီး မှ DC (Direct Current) လျှပ်စစ်ထုတ်လို့ ...
"မျက်လုံး အတွက် ၂၀-၂၀-၂၀ " Wednesday, 10 July 201...
ချစ်စဖွယ် ဆိုရိုးစကားများ 1. ယောက်ျား တစ်ယော...
ဘာသာကြီးလေးရပ် ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လေ့လာခြင်း ဟိန္ဒ...
×××××××××××× ( မွတ်ဆလင် ညီအကိုများသို့ အိတ်ဖွင့်ပေ...
ယနေ့ကာလ ဈေးကွက်လုကြလေသောအခါCloud Cuckoo Land sha...
တခါက အမရာတို့ ရောနေတဲ့ Make ရယ် Do ရယ် ကွာပုံလေးပါ...
လူတစ်ယောက်၏ ပင်ကိုယ် စရိုက်တွက်နည်း စံဇာဏီဘို လ...
ညစာဘာချက်လဲ နှိုင်းရင့်နွေညစာဘာချက်လဲ ------------...
သင်မသိသေးသော ကမ္ဘာတစ်လွှားက အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အချက် (...
ဖုန်းပြော လွန်းသောကြောင့် ကင်ဆာ တစ်မျိုး တွေ့ရှိ ...